सिआइपी पाउने कम्पनीको सूची तयार, सबैभन्दा बढी आयकर तिर्नेको नाम छैन, अरु को/को छन्?
प्रकाशित मिति: Jul 8, 2019 1:23 PM
काठमाडौं। सरकारले सरकारले महत्वपूर्ण व्यवसायिक व्यक्ति (सीआइपी)को सूची तयार गरेको छ। सरकारले ८ शीर्षकमा व्यवसाय तथा लगानी गर्ने व्यापारिक संस्था छनोट गरेको हो।
सिआइपी पाउने कम्पनीको सूची तयार, सबैभन्दा बढी आयकर तिर्नेको नाम छैन, अरु को/को छन्? को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।